Tirada wariyeyaasha lagu dilay Soomaaliya iyagoo howlahooda ku jira laga soo billaabo 1992-kii oo lasoo bandhigay | raascasayrmedia.com
← Shabaab oo Baydhabo ku qab qabtay dad ka ganacsanaya qaadka
Maqaal: Hadal heynta Heesaha Gaarsiiya iyo Garaadlaay →
March 26, 2011 · 6:48 pm
Tirada wariyeyaasha lagu dilay Soomaaliya iyagoo howlahooda ku jira laga soo billaabo 1992-kii oo lasoo bandhigay
Ugu yaraan 34 warye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo 1992-ii markaasoo ay Soomaaliya ka curteen dagaallada 20-ka sano socda, sida ay sheegtay guddiga difaaca weriyeyaasha ee CPJ. Wariyeyaashan ayaanay ku jirin kuwii shilalka gaari iyo siyaabaha kale u dhintay, balse waa kuwai waa kuwii la dilay iyagoo howlahooda saxaafadeed ku jira.
Sannadkii 2010 ee lasoo dhaafay laba wariye oo Soomaali ah ayaa la dilay iyagoo howlahooda warbaahineed ku jira, kuwaasoo kala ahaa Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo ka tirsanaa Raadiyo Muqdisho oo taageerada DKMG iyo Barkhad Cawaale Aadan oo ahaa agaasimaha Radio Xurmo oo ay leeyihiin bulshada rayidka.
Labadan wariye ayaa la sheegay in mid ka mid ah ay dileen koox hubeysan ka tirsan Xarrakatul Shabaab iyadoo midka kalena uu ku dhintay rasaas wiifto ah oo ka timid goob uu dagaal ku dhexmaray ciidamada DKMG, AMISOM iyo Xarrakatul Shabaab.
Wariyeyaasha Soomaaliya ka howlgala ayaa ku shaqeeya xaalad adag, iyagoo mar walba filan kara in loo dilo howshooda warbaahineed. Sannadkii hore ayaa sidoo kale kooxda Ahlusunna waxay xabsiga u dhigtay laba wariye, inkastoo ay markii dambe iska sii-daysay.
19 Feberaayo, 2011. Xarrakatul Shabaab ayaa xirtay sawir-qaade Cabdi Dhaqane Ciye (Cabdi-yare) oo muddo sanooyin ah u shaqeynayay Reuters. Wariyahan ayaa la qabtay isagoo sawirro ka qaadaya gargaar ay Xarrakatul Shabaab degmo ka mid ah kuwa ay Muqdisho ka maamusho ugu qaybinaysay dad dhibaateysan, iyadoo lasii daayay maalmo kaddib, balse weli lama yaqaan sababta loo xiray.
12 Feberaayo 2011. Xoogagga Ahlusunna ayaa waxay xabsiga dhigeen Cabdikariin Axmed Bulxan oo ah wariyaha gobollada dhexe uga soo warrama Radio Shabeelle oo xaruntiisu tahay Muqdisho, iyadoo Bulxan lasii daayay maalin kaddib.
“Runtii, si xun ayaa la iigu hanjabay. Waa la i jir-dilay. Waa markii afaraad oo ay i xirnaan xoogagga daacadda u ah Ahlusunna Waljamaaca. Maalintii xarigeyga ugu horreysay wuxuu ahaa mid qarsoodi ah, wax raashin ahna la ima siin, biyo aad u yar ayaa la i siiyay, waana la ii diiday inaan cid la xiriiro,” ayuu yiri wariye Bulxan.
Ururrada Saxaafada Soomaalida ayaa cambaareeyay dilalka iyo xariga loo geysto wariyeyaasha, iyagoo ka codsaday dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Soomaaliya inay tixgeliyaan wariyeyaasha ka shaqeeya goobaha ay maamulaan.
Bishii Jannaayo ee sannadkan, maamulka Somaliland ayaa xiray Maxamuud Cabdi Jaamac oo ahaa tifaftiraha wargeyska madaxa-bannaan ee Waaheen, waxaana lagu xukumay saddex sano oo xariga ah iyo inuu bixiyo 900 doollar, iyadoo lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah.
Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland Mustaf Cabdi Ciise ayaa sheegay in sheekada sababtay xariga wariye Jaamac ay ahayd in maareeyaha korontada Hargeysa uu si hoose ku shaqaaleeyay 50-qof oo ay isku beel kasoo jeedaan.
Hay’adda CPJ ayaa ku tilmaantay Soomaaliya goobta ugu khatarta badan Qaaradda Afrika oo ay ka howlgalaan suxufiyiinta. Tan iyo sannadkii 2006 waxaa kordhayay tiradaha xarumaha warbaahinta Soomaaliya, balse wariyeyaashu uma shaqeyn karaan si xor ah. Iyadoo xaaladaha ka jira Soomaaliya ay ku qasbeen wariyeyaal badan inay ka cararaan ayna ku noolaadaan dalalka dariska ah iyo kuwo fog-fog.
“Aad ayaan walaacsanahay dilka suxufiyiinta Soomaaliyeed, caga-jugleynta lagu hayo iyo xariga loo geysto,” ayuu yiri wariye Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa kaasoo codsaday in magaciisa la qariyo.
“Beesha caalamka waa inay xoogga saarto sidii suxufiyiinta ka howlgala Soomaaliya loo difaaci lahaa. Rabshadaha Soomaaliya ee sare u sii kacaya waa kuwo khatar ku ah wariyeyaasha weli ka shaqeeya Soomaaliya, waana in si deg-deg ah looga hortago,” ayuu wariyuhu hadalkiisa raaciyay.
Hay’adda CPJ ayaa ugu baaqday hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dagaalku u dhexeeyo inay xurmeeyaan xorriyadda hadalka iyo xuquuda saxaafadda, ayna ka fogaadaan inay ku qasbaan inuu sheego wixii ay doonayaan.